အိမ်မှာ ကလေး နှစ်ယောက် ကျန်ခဲ့လို့ ဆေးရုံ မသွားချင်တဲ့ ကိုဗစ်လူနာ (ကိုဗစ်ဖြစ်ရင် မိသားစုနဲ့ခွဲကို ခွဲရမှာပါ) – စှယျစုံသုတ
အိမ်မှာ ကလေး နှစ်ယောက် ကျန်ခဲ့လို့ ဆေးရုံ မသွားချင်တဲ့ ကိုဗစ်လူနာ (ကိုဗစ်ဖြစ်ရင် မိသားစုနဲ့ခွဲကို ခွဲရမှာပါ)
ကိုဗစ် +ive လူနာနံပါတ်(၅) ဖျားနာရောဂါကုဆေးခန်း။ ၁၅၊၁၁၊၂၀၂၀(တနင်္ဂနွေနေ့)
ယနေ့အတွက် ၂၀ ယောက်မြောက်၊ ဆေးခန်းပိတ်ခါနီးမှ ရောက်လာတဲ့ လူလတ်ပိုင်း အမျိုးသမီးလူနာ၊ ယောက်ျားက ဆိုက်ကားနဲ့ လာပို့တယ်။ ဖျားတာ ၃ ရက်၊ နှာစေးချောင်းဆိုး၊ အနံ့မရတာက ၂ ရက် မို့ ဆေးခန်းလာပြတာတဲ့။
ယောက်ျားက ဒီလေါက်လေးနဲ့ လာပြရမလား ဆိုပီး စိတ်တိုနေတယ်။ လာတာက နေ့တိုင်း P ထွက်နေတဲ့ ရပ်ကွက်က။ ကလေး ၂ ယောက် လူမမယ်လေးတွေနဲ့၊ ပေါင်းအိမ်သား ၄ ယောက် ရှိတယ်။ ဆရာဝန်က ရာဇဝင်မေး ရောဂါလက္ခဏါ စစ်ဆေးပီးသံသယ လူနာသတ်မှတ်တယ်။ ဆေးရုံကို inform referal လုပ်၊ PUI.. ၅ ယောက်မြောက် စာရင်းသွင်းပြီး swab ယူဘို့လုပ်တယ်။ အဲ့ဒီမှါဇာတ်လမ်း စတာဘဲ။
ကျွန်မမစစ်ဘူး၊ ဆေးရုံလဲ မသွားနိုင်ဘူး၊ ယောက်ျားကလည်းမကြည်ဘူး၊ အိမ်မှာ ကလေး နှစ်ယောက်ကလည်း အရွယ်မရောက်သေး၊ အိမ်မှာ ကျမရှိမှ ဖြစ်မှာတဲ့။ swab ယူတဲ့ သမီးလေးက ဖုန်းနဲ့ပြောတယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်ရ မလည်းတဲ့။ p ထွက်နေကျရပ်ကွက်က လာတယ်၊ လက္ခဏါတွေလည်းရှိတယ်၊ ချော့မော့ပြောပြီး ယူလို့။
ခနနေတော့ ပြန်ဆက်တယ်။ ဘယ်လိုချော့လို့မှ မရဘူး၊ ငိုယိုပီး သူ့ကို သောက်ဆေးဘဲ ပေးလိုက်ပါ။ ဘယ်မှလည်း မထွက်တော့ပါဘူး၊ ကလေးတွေ ဒုက္ခရောက်မှာ မို့ပါတဲ့။ ကဲ သမီးရေ မယူဘဲ ပြန်လွှတ်လို့တော့ မဖြစ်ဘူး၊ နဲနဲ ခြိမ်းခြောက်လိုက်၊ ဥပဒေအရ အရေးယူခံရမယ်၊ လာဖမ်းမယ်လို့သာ ပြောဆိုတော့မှ swab ယူလို့ရတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ နံပါတ် ၅ အပါအဝင် သံသယ လူနာ ၅ယောက် စလုံး P ထွက်ပါတယ်။ Swab ယူတဲ့ သမီးလေး ရောက်လာပီးတော့ ဆရာကြီးရယ် သမီးရင်ထဲ မကောင်းလိုက်တာ၊ အိမ်မှာလည်း ဘာမှ ရှိပုံမရဘူး၊ ထမင်းလည်း မစားရသေးဘူးနဲ့ တူတယ်တဲ့။
ဆရာဌေးအောင်က သူစားမဲ့ ထမင်းဘူးကို ပေးခိုင်းလိုက်တယ်။ ဆရာအာကာကလည်း ကျနော်တို့ စုပီးထောက်ပံ့ရအောင် ဆိုပီး ငွေလိုက်စုလို့ရတဲ့ ၃ သောင်းကို လိုအပ်တာသုံးဖို့ ပေးလိုက်ပြီး တိုင်းရင်းဆေးရုံကို ambulance နဲ့ ပို့ပေးရတယ်။
စိတ်ထဲလည်း မကောင်းဘူး၊ မိသားစုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြသနာတွေလည်း မစဉ်းစားခြင်တော့ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သတိပေး၊ အသိပေးခြင်တာက ကိုဗစ်ကြောင့် သေတာ မသေတာက နောက်ထား။ လတ်တလော ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ဒုက္ခရော၊ အိမ်က မိသားစုတွေရဲ့ ဒုက္ခရော၊ တအိမ်လုံး ကလေးလူကြီး ဘိုးဘွားမကျန် Qဝင်ရမှာ တွေရော…. ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြပါလို့။
ကပ်ရောဂါ အပေါင်းမှ ကင်းဝေးကြပါစေ။ လူမှုဒုက္ခများမှလည်း ကင်းဝေးကြပါစေ။
ကိုဗဈ +ive လူနာနံပါတျ(၅) ဖြားနာရောဂါကုဆေးခနျး။ ၁၅၊၁၁၊၂၀၂၀(တနင်ျဂနှနေေ့)
ယနအေ့တှကြ ၂၀ ယောကမြှောကြ၊ ဆေးခနြးပိတခြါနီးမှ ရောကလြာတဲ့ လူလတပြိုငြး အမွိုးသမီးလူနာ၊ ယောကြွားက ဆိုကကြားနဲ့ လာပို့တယြ။ ဖွားတာ ၃ ရကြ၊ နှာစေးခွောငြးဆိုး၊ အနံ့မရတာက ၂ ရကြ မို့ ဆေးခနြးလာပှတာတဲ့။
ယောကြွားက ဒီလေါကလြေးနဲ့ လာပှရမလား ဆိုပီး စိတတြိုနတယြေ။ လာတာက နတေို့ငြး P ထှကနြတေဲ့ ရပကြှကကြ။ ကလေး ၂ ယောကြ လူမမယလြေးတှနေဲ့၊ ပေါငြးအိမသြား ၄ ယောကြ ရှိတယြ။ ဆရာဝနကြ ရာဇဝငမြေး ရောဂါလကျခဏါ စဈဆေးပီးသံသယ လူနာသတမြှတတြယြ။ ဆေးရုံကို inform referal လုပြ၊ PUI.. ၅ ယောကမြှောကြ စာရငြးသှငြးပှီး swab ယူဘို့လုပတြယြ။ အဲ့ဒီမှါဇာတလြမြး စတာဘဲ။
ကွှနမြမစဈဘူး၊ ဆေးရုံလဲ မသှားနိုငဘြူး၊ ယောကြွားကလညြးမကှညဘြူး၊ အိမမြှာ ကလေး နှဈယောကကြလညြး အရှယမြရောကသြေး၊ အိမမြှာ ကမွရှိမှ ဖှဈမှာတဲ့။ swab ယူတဲ့ သမီးလေးက ဖုနြးနဲ့ပှောတယြ၊ ဘယလြိုလုပရြ မလညြးတဲ့။ p ထှကနြကရွေပကြှကကြ လာတယြ၊ လကျခဏါတှလညြေးရှိတယြ၊ ခွော့မော့ပှောပှီး ယူလို့။
ခနနတေော့ ပွနျဆကျတယျ။ ဘယျလိုခြော့လို့မှ မရဘူး၊ ငိုယိုပီး သူ့ကို သောကျဆေးဘဲ ပေးလိုကျပါ။ ဘယျမှလညျး မထှကျတော့ပါဘူး၊ ကလေးတှေ ဒုက်ခရောကျမှာ မို့ပါတဲ့။ ကဲ သမီးရေ မယူဘဲ ပွနျလှတျလို့တော့ မဖွဈဘူး၊ နဲနဲ ခွိမျးခွောကျလိုကျ၊ ဥပဒအေရ အရေးယူခံရမယျ၊ လာဖမျးမယျလို့သာ ပွောဆိုတော့မှ swab ယူလို့ရတယျ။
ဟုတျကဲ့ နံပါတျ ၅ အပါအဝငျ သံသယ လူနာ ၅ယောကျ စလုံး P ထှကျပါတယျ။ Swab ယူတဲ့ သမီးလေး ရောကျလာပီးတော့ ဆရာကွီးရယျ သမီးရငျထဲ မကောငျးလိုကျတာ၊ အိမျမှာလညျး ဘာမှ ရှိပုံမရဘူး၊ ထမငျးလညျး မစားရသေးဘူးနဲ့ တူတယျတဲ့။
ဆရာဌေးအောငကြ သူစားမဲ့ ထမငြးဘူးကို ပေးခိုငြးလိုကတြယြ။ ဆရာအာကာကလညြး ကနွောတြို့ စုပီးထောကပြံ့ရအောငြ ဆိုပီး ငှလေိုကစြုလို့ရတဲ့ ၃ သောငြးကို လိုအပတြာသုံးဖို့ ပေးလိုကပြှီး တိုငြးရငြးဆေးရုံကို ambulance နဲ့ ပို့ပေးရတယြ။
စိတထြဲလညြး မကောငြးဘူး၊ မိသားစုရဲ့ နောကဆြကတြှဲပှသနာတှလညြေး မစဉြးစားခှငတြော့ဘူး။ ဒါ့ကှောငြ့ သတိပေး၊ အသိပေးခှငတြာက ကိုဗဈကှောငြ့ သတော မသတောက နောကထြား။ လတတြလော ကိုယကြိုယတြိုငရြဲ့ ဒုကျခရော၊ အိမကြ မိသားစုတှရေဲ့ ဒုကျခရော၊ တအိမလြုံး ကလေးလူကှီး ဘိုးဘှားမကနြွ Qဝငရြမှာ တှရေော…. ထည့သြှငြးစဉြးစားကှပါလို့။
ကပျရောဂါ အပေါငျးမှ ကငျးဝေးကွပါစေ။ လူမှုဒုက်ခမြားမှလညျး ကငျးဝေးကွပါစေ။
“ထိုငျးထီ ဘတျ (၆) သနျးဆုပေါကျတဲ့ မွနျမာဇနီးမောငျနှံ ဆုငှထေုတျပွီ”